Be Loatra ny Faharatsiana sy ny Fijaliana!
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goujrati Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Lingala Litoanianina Luganda Luo Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mizo Mooré Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Ossète Otetela Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tigrigna Tiorka Tiv Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Be Loatra ny Faharatsiana!
Nalaza ho tia olona sy tsara fanahy i Smita, * vehivavy 35 taona tany Dacca any Bangladesy. Olona nazoto niasa sy falifaly lava no nahafantarana azy. Tia nanampy olona hahalala an’Andriamanitra koa izy. Maty anefa izy. Hoatran’ny nilatsaham-baratra ny fianakaviany sy ny namany nony nandre izany. Tsy ampy herinandro akory mantsy ny naharariany.
Tsara laza koa i James sy ny vadiny, izay 30 taona mahery. Niala tany New York izy ireo, indray mandeha, mba hitsidika ny namany tany amin’ny morontsiraka andrefan’i Etazonia. Indrisy anefa fa tsy tafody intsony izy mivady. Tratran’ny lozam-piarakodia mantsy izy ireo ka maty tsy tra-drano. Nahatsiaro ho banga tanteraka ny fianakaviany sy ny namany ary ny mpiara-miasa taminy.
Be loatra ny faharatsiana na aiza na aiza. Samy matin’ny ady na ny olon-tsotra na ny miaramila. Maro ny tsy manan-tsiny iharan’ny heloka bevava sy ny herisetra. Tsy mifidy taona na fari-piainana ny loza sy ny aretina, fa mitondra faisana daholo izay azony. Mandravarava koa ny loza voajanahary. Miely be ny fanavakavaham-bolon-koditra sy ny tsy rariny, ary mety ho efa niharan’izany mihitsy ianao.
Ara-dalàna ianao raha mieritreritra hoe:
Fa maninona àry ny tsara fanahy no mijaly?
Andriamanitra ve no mahatonga an’izany?
Kisendrasendra ve ireny loza ireny, sa vokatry ny nataon’ny olona ihany?
Sao dia ny zavatra nataon’ilay olona tamin’ny fiainany taloha (na Karma) * àry no mahatonga izany?
Raha tena misy Andriamanitra ary izy no mahery indrindra, maninona no tsy arovany amin’ny ratsy ny tsara fanahy?
Tsy hisy intsony ve ny fijaliana indray andro any?
Tsy ho haintsika ny valin’izany raha tsy fantatsika ny valin’ireto: Nahoana no misy ny faharatsiana? Inona no hataon’Andriamanitra amin’izany?
^ feh. 10 Ny Hindoa no mino an’ilay hoe Karma. Rehefa maty, hono, ny olona dia mifindra amin’ny vatana hafa ny fanahiny, ka arakaraka izay nataony tamin’ny fiainany teo aloha no ho fiainany manaraka.
Hizara Hizara Be Loatra ny Faharatsiana!